Warshadda Qalabka Yogurt -ka Yar ee Shiinaha iyo soo -saareyaasha. BOOD
Qalabka Yogurtka Yar
Yogurt waa nooc ka mid ah cabitaanka caanaha oo leh dhadhan macaan iyo dhanaan. Waa nooc ka mid ah waxsoosaarka caanaha oo caanaha u qaata wax ceyriin ah, la karkariyey kadibna lagu daray bakteeriya faa'iido leh (bilawga) caanaha.
Waxyaabaha yogurt -ka ee suuqa yaallaa waxay u badan yihiin nooc adkaysi leh, nooca walaaqaya iyo nooca dhadhanka miro oo leh noocyo kala duwan oo macaanka juuska miraha ah.
Habka waxsoosaarka yogurtka waxaa lagu soo koobi karaa maaddooyinka, kuleylinta, isku -daridda, madhalaysnimada, qaboojinta, ku -tallaalidda, Istuurka la beddelay ayaa lagu daraa marxaladda dufcadda, iyo saamaynteeda dalabku waxay si dhow ula xiriirtaa xakamaynta hannaanka
Waxyaabaha ay ka kooban tahay: sida ku cad xaashida dheelitirka maaddada, dooro alaabta ceeriin ee loo baahan yahay, sida caanaha cusub, sonkorta iyo dejiye. Starch -ka la beddelay ayaa si gooni ah loogu dari karaa geedi -socodka maaddooyinka, waxaana lagu dari karaa ka dib marka la qaso qalajinta ciridka cuntada kale. Iyadoo la tixgelinayo in istaarijka iyo xanjada cuntada ay u badan yihiin maaddooyin molikali sare leh oo leh biyo-xoog leh, waxaa ka wanaagsan in lagu dhex qaso qaddar habboon oo sonkor granulated ah oo lagu milmiyo caano kulul (55 ℃ ~ 65 ℃) iyadoo la hoos imanayo xaalad kicin degdeg ah si loo hagaajiyo kala firdhinta .
Qaar ka mid ah geedi socodka qalabka yogurt -ka ayaa socda:
Preheating: ujeedada preheating waa in la wanaajiyo wax ku oolnimada habka soo socda homogenization, iyo xulashada heerkulka preheating waa in aanay noqon ka sarreeya heerkulka gelatinization ee istaarijka (si looga fogaado qaab -dhismeedka walxaha ku waxyeeloobay habka homogenization ka dib markii gelatinization istaarijka).
Homogenization: homogenization waxaa loola jeedaa daaweynta farsamada ee dufanka dufanka caanaha, si ay u yihiin guluubyo dufan yar oo si siman caanaha ugu kala firdhay. Marxaladda homogenization -ka, maaddadu waxay ku dhacdaa xiirid, shil iyo xoogagga godadka. Starch starch starch oo la beddelay wuxuu leeyahay iska caabin adag oo farsamo oo ay ugu wacan tahay is-beddelka isku-xidhka, kaas oo ilaalin kara hufnaanta qaab-dhismeedka granule, kaas oo ku habboon in la ilaaliyo dheef-shiidka iyo qaabka jidhka ee caano fadhi.
Madhalaysnimada: pasteurization guud ahaan waa la isticmaalaa, iyo habka jeermis -diidka ee 95 ℃ iyo 300 -meeyada guud ahaan waxaa lagu qaataa dhirta caanaha. Starch -ka wax laga beddelay ayaa si buuxda loo ballaariyay oo gelatinized lagu sameeyay marxaladdan si loo sameeyo dheecaan.
Qaboojinta, ku -tallaalidda iyo halsano: istaarijka la beeniyay waa nooc ka mid ah walaxda molecular -ka sare, oo weli haya qaar ka mid ah astaamaha istaarijka asalka ah, taas oo ah, polysaccharide. Marka loo eego qiimaha pH -ta ee caano fadhi, istaarijka laguma baabbi'in doono bakteeriyada, sidaa darteed waxay ilaalin kartaa xasilloonida nidaamka. Marka qiimaha pH ee nidaamka halsano uu hoos ugu dhaco barta isoelectric casein, casein waa denaturates oo adkeeyaa, sameynta nidaam shabakad saddex-cabbir ah oo ku xiran biyo, qaab-dhismeedkuna wuxuu noqdaa curd. Waqtigaan, istaarijka gelatinized wuxuu buuxin karaa qalfoofka, wuxuu xiraa biyo bilaash ah wuxuuna ilaalin karaa xasilloonida nidaamka.
Qaboojinta, walaaqaya iyo bislaanshaha kadib: ujeeddada kicinta qaboojiyaha yogurt waa in si dhakhso ah loo horjoogsado koritaanka jeermisyada iyo hawlaha enzyme, inta badan si looga hortago wax soo saarka aashitada xad -dhaafka ah iyo fuuq -baxa inta lagu jiro kicinta. Ilaha kala duwan ee alaabta ceyriinka ah awgeed, istaarijka wax laga beddelay wuxuu leeyahay darajo kala -goyn ah oo kala duwan, iyo saamaynta istaarijka la beddelay ee loo isticmaalo wax -soo -saarka caano fadhi ma aha mid la mid ah. Sidaa darteed, istaarijka la beddelay ayaa la bixin karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha kala duwan ee tayada yogurt -ka.
Hore: Miraha Iyo Khudaarta Qallajinaysa Xidhmada Dhan
Xiga: Qalab Beer oo Foore ah oo La Isku Keenay
Soo -saaraha Soo -saaraha Casiirka Tooska ah ee Buuxa ...
Leexo Furaha Geeddi -socodka Wax -soo -saarka Caanaha ee Xusuus -qorka Yaryar ...
Taariikhda Shaandhaynta Shaandhaynta Sharaabka Casiirka
Yogurt Halsano Machine Qaboojiyay Yogurt Vendi ...
Khadka Wax -soo -saarka Caanaha Caano / Warshadda Caanaha
100% Casiirka Muuska Casiir Cabbadaha budada Makin ...